बिचार/ लेख | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » "बिचार/ लेख" गुणस्तरीय प्रसुति सेवा नेसोगको सान्दर्भिकता - डा. पुष्पा चौधरी, अध्यक्ष, नेपाल प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज/ अत्यावश्यकीय प्रसुति तथा स्त्रीरोग सेवाको पहुँच नेपालको सन्दर्भमा सन्तुलित देखिँदैन । राजधानी र सहरी क्षेत्रमा सेवाको पहँुच भए पनि दुर्गममा सन्तोषजनक अवस्था छैन । यही तथ्यलाई मनन् गरेर प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले संस्थागत रूपमा जिम्मेवारी बहन गरी नेपाल प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज [...]
ग्यारेन्टीकासाथ उपचार : विज्ञापनीक भ्रम कि वास्तविकता ? - डा.अरूणा उप्रेती भ्रमपूर्ण विज्ञापनको प्रभावमा परेर मानिसहरु जीवनका हरेक पलमा ठगिरहेका हुन्छन् । विज्ञापनकै प्रभावमा आवश्यक नै नपरेका कुरा पनि किन्ने गरिन्छ । थोरै खर्च गर्ने ठाउँमा धेरै खर्च गर्छन् र आप्mनो स्वास्थ्य बिगार्न आफै अघिसम्म सर्छन् । विज्ञापन देखेकै भरमा कुनै बस्तु प्रयोग गर्नुअघि राम्रोसँग सोच्नु जरुरी छ के विज्ञापनमा भनिएका [...]
नसर्ने रोगका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास डा. चोपलाल भुसाल, अध्यक्ष, नेपाल हेल्थ रिर्सच काउन्सिल / नसर्ने रोग हुनुको मुख्य कारण मानिसको रहनसहन अर्थात् जीवनपद्धतीको ठूलो भूमिका हुन्छ । साथै वातावरणीय प्रतिकुलता र अनुबंशीय कारण पनि यसका कारक हुन सक्छन । केही समय अगाडिसम्म यसको भार धैरै मात्रामा थिएन तर हाल आएर सरुवा रोग भन्दा यी नसर्ने रोग समस्त स्वास्थ्य [...]
नसर्ने रोग : नयाँ चुनौती, नयाँ नीति डा.प्रविण मिश्र, सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय / नसर्ने रोगले कसैलाई कतै अछुतो राखेको छैन । यसको बाछिटा गाउँ–शहर सबैतिर परेको छ । औसतमा प्रत्येक घरमा एक जना मानिस कुनै न कुनै नसर्ने रोगले आक्रान्त छन् । त्यसैले नसर्ने प्रकृतिका रोगको जोखिम विस्तार हुने क्रममा छ । आम जनतासँग जोडिएको यो समस्यासँग लड्नका [...]
काम हँुदैछ स्वास्थ्यमा कोमल प्रसाद आचार्य उपसचिव (कानून) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यकीय सेवा भएकाले यसका लागि राज्यले विभिन्न कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेपालको मूल कानून संविधानले मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरेका अन्य कतिपय हकको प्रचलन र उपयोग गर्नका लागि समेत स्वास्थ्यको हक अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । शारीरिक र [...]
यसरी हुन्छ तनाव व्यवस्थापन –स्वामी आनन्द अरुण / तनाव अहिलेको युगको सबैभन्दा जटिल मानसिक समस्या हो । वैज्ञानिक विकासको सहयोगले जुन–जुन देशमा जीवनशैली जति–जति परिवर्तन भइरहेको छ, त्यति–त्यति नै त्यहा“का मानिस बढी तनावमा बा“च्न बाध्य भइरहेका छन् । सन् २००० मा गरिएको एक सर्वेक्षणमा युरोप र अमेरिकामा ७३ प्रतिशत प्रोफेसनलहरू अति तनावग्रस्त अवस्थामा कार्यरत थिए । यो [...]
जनसंख्याको नतिजा र स्वास्थ्यको पाटो डा. बद्री पोखरेल प्रमुख,जनसंख्या महाशाखा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय देशको समग्र विकासका लागि जनसंख्या अभिन्न विषय भएपनि नेपालको सन्दर्भमा यसले यथेष्ठ प्राथमिकता पाएको देखिन्न । हाम्रो मुलुकमा जनसंख्याका विषय हेर्ने केन्द्रीय निकायलाई नै फरकफरक मन्त्रालयअन्तर्गत सार्ने गरिएको छ । २०६१ सालसम्म जनसंख्यालाई वातावरण मन्त्रालयसँग जोडिएको थियो भने त्यसपछि यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याएर जोडियो । [...]
नेपालमा मेडिकल टुरीजमको सभावना छिटो र सहुलियत दरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पर्यटकको रुपमा अर्को मुलुक जानुलाई मेडिकल टुरिजम भनिन्छ । चिकित्शासास्त्र अध्ययन, स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अन्य गतिबिधिका लागी बिदेशिनुलाई पनि मेडिकल टुरिजमकै दायरामा राखिन्छ । – डा सुवास प्याकुरेल पछिल्लो समयमा धेरै राष्ट्रले मेडिकल टुरिजमलाई आफ्नो देशको प्रमुख उद्योगको रुपमा विकास गरेका छन् । विश्वमा मेडिकल [...]
पाटन अस्पतालले मार्यो मेरी श्रीमती - केशव भट्टराई , स्वास्थ्यकर्मी मैले बझाङमा प्राप्त गरेको पुरस्कार र समुदायको माया परिवारसँग साट्न सकिनँ । बझाङ छाड्नुभन्दा प्रेम बिवाह गरेको श्रीमती आशालाई नै त्यहाँ लैजाने निर्णय गरेँ । उनी पनि हाँसीखुसी सहमत भइन् । उनी १५ महिनाको बालक वोकेर बझाङ आइन् । उनले कहिल्यै दुर्गममा नबसौं भनेको मैले सुनिनँ । मेरो काम [...]
विरामीमाथि हुने लापरबाहीलाई धमिलो आँखाले हेर्छ नेपाली कानुन “चिकित्सकलाई भयरहित वातावरणमा बिरामीको उपचार गर्न दिनु सम्पुर्ण समाज तथा हामी सबैको कर्तब्य हो तर बिरामीको हित एवं कल्याण चिकित्सकको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ” / विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डव्ल्युएचओ ) का मूलमन्त्रमा यो बुँदा पनि उल्लेखित छ । तर सोही संगठनका अनुसार चिकित्सकीय लापरवाही संसारकै प्रमुख दशवटा ज्यानमारा समस्याअन्तर्गत पर्छ । तथ्यहरुले भन्छन्, अस्पताल [...]